Bitcoin debit Card Comparison 2018 Bitcoin Credit Card – Thenga Bitcoin nge Card Credit
Yintoni ikhadi debit bitcoin?
Ikhadi bitcoin debit i MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA okanye Mastercard ukuba unako ukusebenzisa ukuthenga iimpahla kunye neenkonzo neevenkile online ne-offline okanye irhoxise imali-ATM. Ngelo xesha linye usibonisa ngqo ngezimali bitcoin. amakhadi debit Bitcoin yenza i kalula ukuba sichithe imali cryptocurrency naphi na apha ehlabathini.
Ziziphi iindidi amakhadi debit bitcoin ikhona?
Ikhadi bitcoin debit zeplastiki Kubonakala ngathi MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA oqhelekileyo okanye Mastercard apho ungasebenzisa ngendlela efanayo. Ikhadi bitcoin debit virtual ukhutshwe intanethi iinkcukacha efanayo ikhadi debit eqhelekileyo. Igama wekhadi, umhla wokuphelelwa kunye neekhowudi CVC / CVV zilungiselelwa umyalelo, kodwa akukho imveliso phsyical ukwenza kube lula yaye ngokukhawuleza ukufikelela imali.
njani I ukusebenzisa ikhadi debit bitcoin?
Uyakwazi ukusebenzisa ikhadi bitcoin debit njegawo nawaphi na ikhadi debit prefunded. Unga tirhisa yentsalela ikhadi ukuthenga iimpahla kunye neenkonzo nakwiivenkile asekuhlaleni okanye kwiivenkile online. Ukuba unayo bitcoin ikhadi debit zeplastiki, unako ukurhoxisa imali evela-ATM. Uyakwazi ukusebenzisa ikhadi lakho debit bitcoin ukwenza ukuthenga ekhaya kunye nakumazwe ngamazwe.
Zeziphi iimali ndikwazi ukusebenzisa ikhadi bitcoin debit nge?
Bitcoin amakhadi debit uzibambileyo mali ezikhoyo zemali eyake ecaleni bitcoin. Iimali ithandwayo USD, EUR and GBP. Le lwemali lingamiselwa njengoko lwemali engagqibekanga ezinxulumene nemali bitcoin debit card, ngoko Iintengiselwano lwenziwa ikhadi zibonakaliswa kuloo lwemali. Couple kwababoneleli vula iimarike ikhadi bitcoin debit ukuba nemali engakumbi ngokunjalo. Phakathi kwabanye, ababoneleli kwakhona inika amakhadi debit bitcoin ngohlobo kokwendalo kwi miri, ICNY, i-JPY, KRW, AUD and CHF. Abanye ababoneleli Kwakhona unokukhetha ukuxhasa ikhadi altcoins kwakunye ecaleni bitcoin.
Ndisenako na isiko ikhadi debit bitcoin?
Ukuze ukuba ikhadi debit bitcoin, kufuneka ubhalise kwi kwelinye iqonga lwecebo '. Inkqubo yokubhalisa iquka ezinika iinkcukacha zobuqu ze wekhadi, efana negama, umhla wokuzalwa kunye nendawo yokuhlala. Ingcaciso enikwe kufuneka ke ngoko ukuba kuqinisekiswe nge ID ifoto kunye nobungqina yokuhlala. Oku kunokuba oyilwayo equlathe idilesi caldholder. Emva ngokubeka umyalelo kunye nokukhetha indlela yokuthumela amakhadi zeplastiki kusiwa ikhaya lakho. Xa uye ukhetha i ikhadi virtual, iinkcukacha ikhadi zikhutshelwa kwi dilesi ye email yakho. Ukuba ngaba ufuna ukwabelana ngeenkcukacha zakho, ukuba ingayalela ikhadi debit bitcoin engaziwa ngaphandle yokuqinisekisa.
Ndingayifumana ikhadi bitcoin debit ngaphandle yokuqinisekisa?
Ewe. amakhadi debit Anonymous bitcoin ziyafumaneka Isibini ababoneleli kwimarike. Ukuba awufuni ukuba iphumele inkqubo yokungqinisisa yokubonelela photo ID kunye nobungqina yokuhlala, uyakwazi ukukhetha i bitcoin ikhadi debit engaziwa. Kulo mzekelo nangona kunjalo, kubalulekile ukuqaphela ukuba imida esebenzayo abasebenzisi lungaqinisekiswanga zisoloko asezantsi xa kuthelekiswa kubasebenzisi eqinisekisiwe. imali ngoko eliqingqiweyo kuphela imali isetyenziswe kunye amakhadi bitcoin debit engaziwa endaweni yokubonelela nje igama ukuba boniswa ikhadi.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana ikhadi debit bitcoin?
Amakhadi zeplastiki bitcoin debit zikhutshwa MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA okanye Mastercard kwaye kuthatha malunga 2-3 iiveki bezibona. Ubungakanani bexesha ukufumana ikhadi ngokuxhomekeke kumgama phakathi umboneleli ikhadi kunye wekhadi. Ngokuba kwentlawulo engaphezulu unikezelo unako basengakhethwa zonke ababoneleli. Kulo mzekelo amakhadi ezinikezelwa ngaphakathi 2-5 business days with the services provided by DHL along with a tracking number.
njani na phezulu up ikhadi bitcoin debit?
Unga phezulu up ikhadi bitcoin debit nezinye iindlela eziliqela ngaphandle bitcoin. Ungasebenzisa bank wire transfer, credit cards okanye debit kunye nabaniki intlawulo ehambelanayo Neteller and Skrill. Kwiimeko ezininzi PayPal ke ayikho phakathi indlela yokubhatala elamkeleke ngenxa ngokwemiqathango yalo kunye neemeko.
njani ndirhoxisa imali ikhadi debit bitcoin?
Uyakwazi ukurhoxisa imali iindlela bitcoin debit card efanayo njengoko zilayishwe akhawunti. Ungathumela bitcoins kwenye idilesi. Uyakwazi kulisusa imali kwi-akhawunti yebhanka okanye umnikezeli intlawulo enye, ezifana Skrill okanye Neteller. Kwiimeko ezininzi PayPal ke ayikho phakathi indlela ekubalekeni kwamkelwa amakhadi debit bitcoin.
Ngaba ndirhoxisa imali-ATM kunye nekhadi debit bitcoin?
Ewe. Uyakwazi ukurhoxisa imali-ATM ehlabathini lonke usebenzisa ikhadi yeplastiki debit bitcoin.
Indlela iindleko bitcoin debit card kakhulu?
Amaxabiso amakhadi bitcoin debit izinto ezahlukahlukeneyo kubaboneleli bebonke. Ixesha elinye nokukhutshwa iindleko a bitcoin ikhadi debit kokulungisa phakathi 5-25 iUSD. Iindleko kunikezelo bitcoin ikhadi debit virtual ngaphantsi kakhulu, ungenza nokuba ukufumana yona simahla kwezinye iindawo. Ngaphandle ngexesha elinye iindleko zemveliso ye ikhadi, imali yesondlo-akhawunti yenyanga kuhlawulwa imali 1 USD ngenyanga.
Iindleko transaction amakhadi bitcoin debit ukuba nelula kakhulu, amakhadi ibiza kakhulu kunokuba imirhumo yorhwebelwano ezincinane. Ilayisha ikhadi idla simahla, ngexesha notsalo ebizwayo zisekelwe uhlobo oyikhethayo. Le POS kunye online zithengwa angamangalelwa imali esisigxina okanye ipesenti prorata. ATM notsalo ebizwayo phakathi 1.5-2.5% transaction ngalinye, notsalo ngamazwe kubiza ngaphezu. Kukho kwakhona intlawulo lwemali translation ebizwayo ukuba lwemali engagqibekanga ayihambelani lwemali intengiselwano.
Yiyiphi imida ikhadi debit bitcoin?
Kwezinye iimeko kukho imali ubuninzi mali uyakwazi ukulayisha ukuba ikhadi debit bitcoin. Oku kuzichaphazela isixa semali uyakwazi ukuchitha ikhadi kunye semali ukuba angarhoxa-ATM. abasebenzisi iqinisekisiwe ukuze imida ephezulu kunye nabanye ababoneleli inikeza ikhadi bitcoin debit mda kubasebenzisi ababhalisiweyo. Le topup ebomini zikhawulelwe ngeenxa 2000 USD kubasebenzisi engaziwa.
Zeziphi iimali Nhoza ATM ezinxulumene ikhadi debit bitcoin?
Bitcoin ababoneleli ikhadi debit afune intlawulo xa emkayo imali evela-ATM. Le ntlawulo ingagcwaliswa intengiselwano okanye prorata ngalinye. Le notsalo ATM zasekhaya zixhobo zingaxabisi emhlabeni 1.5%, ngoxa notsalo ATM zezizwe ngezizwe kuhlawuliswa 2.5%.
Yintoni lwemali Imali translation ezinxulumene debit bitcoin card?
imali lwemali translation ebizwayo kwimeko lwemali engagqibekanga ye-akhawunti ezinxulumene ikhadi bitcoin debit into eyahlukileyo kuthelekiswa lwemali lungamkeleki. Kule meko a esisigxina 3% imali currency translation ebizwayo yi bonke ababoneleli kwimarike.